I-Best Baby Bhotography - Izeluleko Ezi-5 Ezilula Zokwenza kube Kuhle
Ukuletha ekhaya a ingane entsha kuyisizathu sokugubha, njengezikhathi ezihlukile ezilandelayo. Ngemuva kokuzinza empilweni yakho entsha njengomzali, iseshini yokuthwebula izithombe yezingane ingesinye sezinyathelo ezilandelayo ezivame kakhulu kuMama noBaba. Funda ukuze uthole izeluleko zethu ezi-5 ezibaluleke kakhulu ezizokusiza uthathe okungcono kakhulu Izithombe yengane yakho esanda kuzalwa.
Ithiphu Yezingane Zokuthwebula # 1 - Dlala Ngokukhanya
Ukuthwebula izithombe, okuyisisekelo sako konke, ukuthwebula ukukhanya ngesikhathi esithile esithile. Lokhu kukhanya kungavela emithonjeni emibili eyinhloko; ilanga futhi ukukhanya okufakelwayo.
Yazi, ukukhanya kwelanga kungaba nokhahlo enganeni esanda kuzalwa, kepha lokho akusho ukuthi akufanele Isithombe ingane yakho ngaphandle. Zama ukubamba i-photoshoot yakho ngosuku olunamafu kancane, noma emthunzini wesihlahla esikhulu. Lokhu kuzosiza ekusakazeni ukukhanya kwelanga, kususwe izithunzi ezinzima nokugqanyiswa okushayiwe. Okubaluleke kakhulu, qiniseka ukuthi ilanga likhona ngaphambili kwengane yakho, hhayi ngemuva kwalo, njengoba ufuna lakho ubuso bengane ukukhanyiswa yilanga. Izithombe ezibuyiselwe emuva Kunzima ukufeza.
Ngokudubula kwangaphakathi, ukukhanya kwelanga akutholakali ngaso sonke isikhathi ukukhanyisa indawo. Kulokhu, qamba ngobuciko nge Umthombo okhanyayo! Zama ukusebenzisa imithombo yokukhanya eyingqayizivele, njenge amalambu eholide noma amalambu ahlukile imibala ye-bulb ukwengeza emkhathini wengane yakho yezithombe. Ungasebenzisa ngisho ne-flashlight ebekwe kahle ukugqamisa ingxenye yendawo. Zama ukuzama ukukhanyisa ukukhanya ezindongeni noma ukukuhlunga ngezindwangu ezinkulu. Kwesinye isikhathi lokhu kukhanya okusakazekile kungangeza ngempela emkhathini wesithombe.
Khumbula ukuthi iningi izibani zasendlini alikhanyi kakhulu kunelanga. Ngenxa yalokhu, ungahle uthande ukusebenzisa i- i-tripod ukugcina ikhamera yakho imile nokunciphisa ukufiphala noma ukufaka ifleshi ukukhanyisa indawo. Uma ukhetha ukusebenzisa ifayela lakho le- flash, zama ukuyithola ukuze igxume ophahleni ngokubeka ikhadi elimhlophe phambi kwe-flash ku-angle engu-45 ° iye ophahleni. Lokhu kuzosiza ukuvimbela i-flash ekugcwaliseni izithunzi zemvelo nokwenza isicaba sibe lula.
# 2 - Hlela Isimo Sakho
Kunezindlela eziningi ezilula ongathatha ngazo isithombe esijwayelekile futhi usenze singajwayelekile ngokuhlelela okuncane.
Isibonelo, uma uhlela i ingaphakathi lesithombe sezingane ungamboza indawo yesehlakalo ngephepha elinombala noma a ingemuva le-muslin ukunikeza ingane yakho isithombe ubuntu. Ungase futhi ukudlala nge ukwakheka ezahlukene ukusiza ukugqamisa ingane yakho. Ukubeka kubo ngengubo ethambile noma eceleni ukuqhakaza izimbali ingangeza ngempela esithombeni. Noma ungenza okuphambene ngqo bese usebenzisa isizinda esimcaba, esimhlophe ukubeka konke ukugxila enganeni yakho esanda kuzalwa.
# 3 - Yiba Nobuciko
Izithombe ezinhle kakhulu kwesinye isikhathi zivela kakhulu imibono yokudala. Sifuna ukuhlanganyela nawe eminye imibono engaphandle kwebhokisi esinethemba lokuthi izokukhuthaza ukuthi usebenzise amathuluzi onawo ekhaya ukuthatha isithombe esimangalisayo sengane yakho.
Zama ukudlala indawo yesehlakalo ukwengeza ukujula ezithombeni zakho zengane. Ungakwenza lokho ngokudubula indawo ebukeka sengathi ithathwe kokuhlukile ngombono, noma engeza i- ubukhulu besithathu esithombeni sakho esicabalele. Ukwenza izithombe ze-3D eziboniswe kuleli khasi, sisebenzise uhlelo lokusebenza lwe-iPhone ne-Android olubizwa I-LucidPix. Lolu hlelo lokusebenza luzothatha izithombe zakho zengane bese lisebenzisa i-AI ukubenza babe yi-3D ngokuthepha okukodwa kwenkinobho. Bekungeke kube lula! Uma udala ngokwengeziwe, ungathola imiphumela engcono.
# 4 - Khetha Itimu
Uma ukhetha itimu yezithombe zakho, ingakusiza ukuthola ifayela le- izesekeli futhi zasesiteji udinga ukwenza ingane yakho isithombe esihle. Ukuphefumulelwa ingaqhamuka kumabhayisikobho owathandayo, isikhathi sokuzalwa kwengane yakho, ubulili bengane yakho, noma yini enye ebalulekile kuwe nasempilweni yengane yakho.
Kulokhu, i izesekeli, ingubo nombala oyinhloko wesigcawu kungasiza kakhulu ekwenzeni i-photoshoot ephelele. Unalokho engqondweni, lapho ukhetha itimu, hamba nayo yonke! Zijabulise!
# 5 - Hambisa Umbono
Kungani ungazami okwehlukile angles futhi ushintshe umbono wesithombe? Ungasebenzisa iladi ukwandisa ibanga ukusuka kuwe nasenganeni futhi wakhe umqondo omkhulu wokubuka, noma ungashintsha i-engeli ngokuhamba uzungeze ingane yakho uze uthole umbono ophelele. Kwesinye isikhathi ngokumane ushintshe lapho kutholakala khona ikhamera kungenza umehluko omkhulu ezithombeni zakho.
Like lezi zithombe ze-3D?
Ukwenza lezi zithombe ezinhle ze-3D, sisebenzise uhlelo lokusebenza lwe-smartphone olubizwa ngokuthi I-LucidPix. Lolu hlelo lokusebenza olungabizi kakhulu lungathatha izithombe zakho ezijwayelekile futhi luzenze kabusha ku-3D ye-immersive. Izame namuhla!
I-5 Parallax Effect iPhone Izinhlelo Zokukhulisa izithombe zakho →← Abadali be-GIF abaphambili abahlanu